ဓမ္မဂင်္ဂါ: ရဟန်းနှင့် သေနတ်နှင်းဆီ
နံနက် ၁၁.၀၀ နာရီ တိဗက်တက္ကသိုလ်အင်္ဂလိပ်စာဌာန စာသင်ခန်း
စာသင်ခန်းထဲသို့ လှမ်းဝင်လိုက်တော့ အင်္ဂလိပ်စာဆရာမ ပါမောက္ခ မစ္စဘနာဂျီက ခရီးဦးကြိုပြုကာ သူ့အတွက် ထိုင်ခုံတစ်ခု စီစဉ်ပေးသည်..။ စာသင်ခန်းရှေ့နံရံပေါ်တွင် စာရေးရန် အနက်ရောင်သင်ပုန်းကြီးတစ်ချပ်နှင့် ရုပ်ပုံကားချပ်များ၊ မြေပုံများချိတ်ဆွဲပြရန် အ၀ါရောင် သင်ပုန်းကြီးတစ်ချပ်ရှိသည်။ အ၀ါရောင်သင်ပုံကြီးပေါ်တွင် ချောမောသွယ်လျသော အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ရုပ်ပုံကားချပ်ကို ချိတ်ဆွဲထားသည်..။ ရုပ်ပုံအောက်က စာတမ်းကို သူဖတ်လိုက်သည်.။ ဆီဗီလီယာ ပလပ်သ် (Sylvia Plath (October 27, 1932 – February 11, 1963)) အမေရိနိုင်ငံကန်ဖွားကဗျာဆရာမ..။ စာသင်ခန်းထဲတွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူ ၃၀ ခန့်ရှိနေသည်။ တိဘက်လားမားဘုန်းတော်ကြီးများ၊ သီလရှင်များက ထက်ဝက်ခန့်ရှိနေသည်..။ သူက တစ်ခန်းလုံးကို ပြုံးပြလိုက်သည်။ မစ္စဘနာဂျီက သူ့အတွက် ကြာရည်တစ်ခွက် ကမ်းပေးသည်။
အမှန်တကယ်တော့ ဤစာခန်းသည် သူနှင့် မဆိုင်ပါ..။ ပညာရေးတက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ် သင်တန်းသားသင်တန်းသူများ လက်တွေ့ကွင်းဆင်းပို့ချနေသော စာသင်ခန်းသာ ဖြစ်သည်..။( BEd ဘွဲ့ကို ရွှေပြည်ကြီးတွင် ဘီအီးဒီ ဟု အသံထွက်သော်လည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဘီအက်ဒ်ဟုသာ သိကြသည်..။) အင်္ဂလိပ်စာဆရာမက ဘီအက်ဒ်သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားသည်ကို အကဲဖြတ် မှတ်ချက်ပေးရသည်။ စာသင်ခန်းနောက်ဆုံးခုံမှာလည်း သင်တန်းကြီးကြပ်သူဆရာတစ်ဦးရှိနေသည်။ စာသင်ကြားပုံအမူအရာများနှင့် လေယူလေသိမ်းအနေအထားများကို ဝေဘန်တည့်မတ်ပေးသည်..။ ကောင်းလေစွ..။
ဘင်္ဂါလီအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်သူ မစ္စဘနာဂျီက သူမ၏ စာသင်ခန်းသို့ အမြဲတမ်းဖိတ်ခေါ်လေ့ရှိသော်လည်း သူက ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြဖြင့် မရောက်နိုင်ခဲ့..။ ခုတော့ ရောက်လာခဲ့ပြီ..။ သူစာခန်းထဲရောက်ချိန်တွင် စာသင်ရန်အလှည့်ကျနေသည့် ကျောင်းသူတစ်ဦးက ကဗျာဆရာမ ဆီလ်ဗီယာ ပလပ်သ်၏ ဘ၀နှင့် ကဗျာကို ဟန်ပါပါသင်နေသည်..။ သေချာကြည့်လိုက်တော့ သူနှင့် မိဂဒါဝုန်လမ်းမပေါ်တွင် တွေ့နေကျ မျက်မှန်ထူထူဝိုင်းဝိုင်းကြီး တပ်ဆင်လေ့ရှိသည့် သေးသွယ်သောကျောင်းသူလေးဖြစ်နေသည်..။ ဖရက်ရှာကျောင်းသူလေးဟု ထင်မှတ်ထားသော သူမက ခပ်တည်တည်ပင် ဆီလ်ဗီယာ ပလပ် လုပ်နေတော့ အံ့သြသွားသည်..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကဗျာဆရာမလေး၏ ကြေကွဲဖွယ်လန်ဒန်နေ့ရက်များဆီသို့ စာသင်ခန်းတစ်ခုလုံးကို သူမ ဆွဲခေါ်သွားခဲ့သည်..။
သင်ကြားချိန်မိနစ်နှစ်ဆယ် ကျော်သွားသောအခါ ဆရာမက '' We should give the time to another student'' ဟု သတိပေးသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ မလိုအပ်ဘဲ စာသင်ခန်းရှေ့မှာ ၀ါရင့်ဆရာမကြီးတစ်ယောက်ပမာ လမ်းလျှောက်ရင်း စာရှင်းပြခြင်းက သူမ၏ အသံကို ဆွဲဆောင်မှုအားနည်းစေသည် ဟု သူက ထင်မြင်နေခိုက် နောက်တန်းမှာ ထိုင်နေသည့် ဆရာကလည်း သူ့အတွေးနှင့် ထပ်တူ မှတ်ချက်ပေးသည်ကို ကြားရ၏။
သူက နာရီကို ကြည့်ကာ ထိုင်ရာမှ ထဖို့ရန် ပြင်လိုက်သည်..။ မစ္စဘနာဂျီက '' ဘန္တေကြီး နောက်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကိုလည်း အားပေးလိုက်ပါဦး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်..'' တဲ့..။ ဒိုရ်ဂျီ ဆိုသော တိဘက်ကျောင်းသားလေး ၀င်လာသည်..။ ထိုကျောင်းသားက အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး ဂျဝါဟလာနေရူး၏ ရုပ်ပုံကားချပ်ကြီးတစ်ခုနှင့် အရေးကြီး ခုနှစ်သက္ကရာဇ်များရေးထားသည့် စက္ကူဖြူတစ်ချပ်ကို အ၀ါရောင်သင်ပုန်းကြီးပေါ်တွင် ပင်အပ်များဖြင့် သွက်လက်မြန်ဆန်စွာ ချိတ်ကပ်လိုက်သည်။
ထို့နောက် ပါမောက္ခဆရာကြီးတစ်ဦး၏ ဟန်ပန်မျိုးဖြင့် စာသင်ခန်းဘက်ကို မျက်နှာမူကာ '' အိန္ဒိယနိုင်ငံပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ကို သိပါသလား '' ဟု မေးလေသည်..။ အစပိုင်းတွင် မေးခွန်းများမေးလိုက် ဖြေလိုက်ဖြင့် အဆင်ပြေသော်လည်း မိနစ်နှစ်ဆယ်နှင့် သင်ခန်းစာပမာဏမမျှတသည့်အတွက် ခုနှစ်သက္ကရာဇ်များအစဉ်အတိုင်းမကျတော့.။ အိန္ဒိယ လွတ်လပ်ရေးရပြီးမှ နေရူးကြီးထောင်ထဲသို့ ပြန်ရောက်သွားသည်..။ သင်ပုန်းကြီးပေါ်တွင် တဒေါက်ဒေါက်ရေးရင်း မေးခွန်းများကို တရစပ်မေးတော့ အဖြေနှင့် ညှိမရတော့..။ မည်သို့ဆိုစေ သင်ကြားချိန်မိနစ်နှစ်ဆယ်ကို ခပ်ရဲရဲပင် ကျော်ဖြတ်သွားသည်.့ ကျောင်းသားကို သူ သဘောကျသည်။ ကြိးကြပ်သူဆရာက '' စာသင်နေစဉ် မေးခွန်းမေးသည့်အခါ သင်ပုန်းကြီးကို မကြည့်ဘဲ သင်တန်းဘက်သို့ မျက်နှာပေးပြီး မေးပါ '' ဟု သင်ပေးသည်။
အော်....ရုပ်ပုံကားချပ်၊ မျက်နှာအမူအရာ၊ လက်ဟန်ပန်အနေအထား၊ စကားလုံးအထားအသို စသော သင်ထောက်ကူအရာဝတ္ထုများ.....။
နံနက် ၁၁း၄၅ နာရီ ပါဠိစာပေဌာနစာသင်ခန်း
သူ့ ပါဠိစာသင်ခန်းလေးထဲ ၀င်လိုက်သည်နှင့် သူ့တပည့်များက '' ဂုရုဂျီ ပရ်ဏာမ် '' ဟု မဇ္ဈိမထုံးစံ ဂါရ၀စကားဖြင့် နှုတ်ဆက်သည်။ သူက သင်ပုန်းကြီးပေါ်တွင် သေနတ်တစ်လက်နှင့် နှင်းဆီပန်းတစ်ပွင့်ပုံကို တွန့်တွန့်ကွေးကွေး ရေးခြစ်လိုက်သည်.။ အနည်းငယ်တော့ တူဟန်ရှိသည်။ လှတာတော့ လုံးဝမလှ.. သူက မင်းဝေအောင်မှ မဟုတ်တာ ကိစ္စမရှိ။
သူရေးဆွဲထားသည့်ပုံကို မသေချာမှာ စိုး၍ Gun ( for) Rose ဟု ဆက်ရေးလိုက်သည်..။ နီပေါလ်ကျောင်းသားက '' Guru Ji, It should be Gun & Rose .'' သူက နေပါဦးကွာ သဘောဖြင့် လက်ပြကာ သင်ခန်းစာဆီ သွားကြစို့ လုပ်လိုက်သည်..။
တက္ကသိုလ်ဥပစာတန်းများတွင် သူသင်နေရသည်က ပိဋကတ်စာပေကောက်နှုတ်ချက်များဖြစ်သည်။ ဇာတကနှင့် ဓမ္မပဒ၀တ္ထုများ၊ ဗုဒ္ဓ၀ံသအဋ္ဌကထာထုတ်နှုတ်ချက်များက ဗုဒ္ဓအရှင်နှင့် ဗုဒ္ဓခေတ်အိန္ဒိယကို ထင်ဟတ်စေနိုင်သည့်အတွက် ကျောင်းသားများ စိတ်ဝင်စားကြသည်။ ပါဠိသဒ္ဒါနှင့် တွဲဖက်ပြီး ပါဠိဖတ်စာအဖြစ် သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်သည်.။ ပါဠိတော်မူရင်းအတိုင်းသင်ကြားရခြင်းဖြစ်၍ တစ်ခါတရံ ရှင်းပြရသည်မှာ လက်ပေါက်ကပ်လှသည်..။ ၀ိဇ္ဇာတန်းများတွင်တော့ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကို သင်ပေးရသည်..။
ပြီးခဲ့သည့်လက ရွှေပြည်ကြီးမှာ လူတိုင်းနီးပါးသိနေကြသည့် ဘုရားအလောင်းယုန်မင်းဇာတ်ကို ပိဋကတ်မူရင်းအတိုင်း တစ်လုံးချင်း ဘာသာပြန်ပြီး သူသင်ပြသည်..။ ဘုရားအလောင်းယုန်မင်း၏ မိတ်ဆွေများဖြစ်သည့် ဖျံ၊ မျောက် နှင့် မြေခွေးတို့အကြောင်း ရှင်းပြတော့ ဖျံကို တပည့်များက မသိကြ..။ဖျံက ပါဠိလို ဥဒ္ဒ၊ အင်္ဂလိပ်လို Otter ..။
ထိုနေ့က အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းသားသုံးယောက်၊ ရုရှားနိုင်ငံသား မွန်ဂိုတစ်ယောက်နှင့် အိန္ဒိယ ကနာတာကားပြည်နယ်သူတစ်ယောက်ပါဝင်သည့် သူ့ပါဠိစာသင်ခန်းလေးသည် တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့သည်..။ မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်နှင့် ဝေးလှသည့် အညာသားတစ်ဦးမျှဖြစ်သော သူက ဖျံဆိုသော သတ္တ၀ါဆိုသည်မှာ ရေထဲတွင် ကျက်စားလေ့ရှိကြောင်း၊ ရေကူးကျွမ်းကျင်ကြောင်း စသည် ခပ်တည်တည် ရှင်းပြသည်..။ သူတပည့်ကျော်များက နားမလည်ဟန် ခေါင်းခါပြ မျက်မှောင်ကြုတ်ပြကြသည်..။ သို့နှင့် သူက ပန်းချီကျော်ကြီးတစ်ယောက်ဂိုက်အပြည့်ဖြင့် ဖျံတစ်ကောင်၏ ပုံကို သင်ပုန်းကြီးပေါ်တွင် ခြစ်ခြုတ်ရေးဆွဲပြလိုက်သည်..။ '' Oh Guru Ji, that isamouse.'' သေရော..။
နောက်နေ့မှာတော့ သူ့ နုတ်ဘုတ်ခ်သေးသေးလေးတွင် အင်တာနက်မှ ဖျံပုံများ ရနိုင်သမျှ ဆွဲချကာ ပြလိုက်ပါမှ လင်းသွားကြသည်..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ လွယ်အိတ်ထဲတွင် နုတ်ဘုတ်ခ်သေးသေးလေးနှင့် အင်တာနက်မိုဒမ်တစ်ချောင်းအမြဲဆောင်ဖြစ်တော့သည်..။ တကယ်လည်း အလုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်..။ ရှင်းကြစေ လင်းကြစေသတည်း..။
ယနေ့ သင်ရမည့် သင်ခန်းစာက မင်းကျင့်တရားများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ရာဇောဝါဒဇာတ်ဖြစ်သည်..။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းက ဗုဒ္ဓဘုရားအလောင်းသည် ကာသိတိုင်းနိုင်ငံ၊ဗာရာဏသီမြို့တော်၏ ဘုရင်ဗြဟ္မဒတ်ဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်ကို တရားနှင့်အညီ အုပ်ချုပ်သဖြင့် ဥပဒေစိုးမိုးကာ နိုင်ငံအ၀ှမ်းအေးချမ်းသာယာသည်။ နောက်ဆုံး အမှုအခင်းပဋိပက္ခများ မရှိတော့၍ တရားရုံးများကိုပင် ပိတ်သိမ်းရတော့သည်။ ဘုရားအလောင်းတော်က တိုင်းပြည်၏ သဘောထားအမှန်ကို ကိုယ်တိုင်သိလို၍ စုံစမ်းရန် မြင်းရထားဖြင့် ထွက်လာခဲ့သည်။ ပြည်သူပြည်သားအားလုံး၏ ဘုရင်းမင်းမြတ်သက်တော်ရှည်ကြောင်း ဆုတောင်းသံများကိုသာ ကြားရသည်။ သို့နှင့် မြို့တော်အပြင်ပသို့ ခရီးဆက်ခဲ့ရာ ဂင်္ဂမြစ်ကမ်းတစ်နေရာတွင် ကောသလတိုင်းနိုင်ငံ သာဝတ္ထိမြို့တော်ဘုရင် မလ္လိကာနှင့် တွေ့ရသည်။ မလ္လိကာသည်လည်း ဘုရားလောင်းနည်းတူ ကျင့်သုံးသဖြင့် မြို့ရွာငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောလေသည်။
ယခု ပြည်သူ့အသံကို ကြားလိုသော ဘုရင်းမင်းမြတ်နှစ်ပါး ထိပ်တိုက်ဆုံကြပြီ.။ မြစ်ကမ်းဘေးလမ်းက ကျဉ်းလှသည်။ မြင်းရထားတစ်စီးသာ သွားနိုင်လေမည်..။ မလ္လိကာဘုရင်၏ မြင်းရထားထိန်းက ဗြဟ္မဒတ်ဘုရင်၏ ရထားထိန်းကို လမ်းဖယ်ပေးရန် ပြောသည်။ ဗြဟ္မဒတ်ဘုရင်၏ ရထားထိန်းကလည်း ဧကရာဇ်တစ်ပါး၏ မြင်းရထားဖြစ်၍ လမ်းဖယ်မပေးနိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုသည်..။ သို့နှင့် မေးခွန်းများမေးကြရင်း ဧကရာဇ်ဘုရင်များဖြစ်နေကြသည်ကို သိသွားသောအခါ ဘုရင်နှစ်ပါး၏ အသက်အရွယ်က အစ တိုင်းပြည်အခြေအနေအဆုံး အားလုံး တပြေးညီဖြစ်နေသည်ကို အံ့သြဖွယ်ရာ တွေ့ရသည်..။ နောက်ဆုံးတွင် ဧကရာဇ်မင်းနှစ်ပါး၏ နိုင်ငံရေးပေါ်လစီကို ကိုယ်စီ တင်ပြကြသည်..။
ဒဠှံ ဒဠှဿ ခိပတိ၊
မလ္လိကော မုဒုနာ မုဒုံ။
သာဓုံ ပိ သာဓုနာ ဇေတိ၊
အသာဓုံ ပိ အသာဓုနာ။
အက္ကောဓေန ဇိနေ ကောဓံ၊
အသာဓုံ သာဓုနာ ဇိနေ။
ဇိနေ ကဒရိယံ ဒါနေန၊
အမုန်းရန်ငြိုးကို အပြုံးနဲ့ သင်ပုန်းချေ..
ဂါထာနှစ်ပုဒ်ကို နှစ်ပုဒ်ကို သူ ရှင်းပြလိုက်တော့ တပည့်လားမားရဟန်းဖြစ်သူ လော့ဘ်ဆန်နေဂီက ''ယာပို ဒု ယာပိုဒု '' (သိပ်ကောင်းတာပဲ ဂုရု ဂျီး ) ဟု ကောင်းချီးပေးသည်။ သူက မလ္လိကာဘုရင်၏ နိုင်ငံရေးမူဝါဒကို Gun to Gun Policy ဟု ချခင်းပြလိုက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘုရားအလောင်းတော်ဗြဟ္မဒတ်ဘုရင်၏ ကျင့်သုံးမှုကိုတော့ Gun for Rose Approach ဟု အမည်တပ်ပေးလိုက်သည်။ အဟမ်း..။ ရော့ခ်ဂီတအပြင်းစားများကို သီဆိုတီးခတ်လေသည့် Gun & Rose နှင့် လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်း...။
နီပေါလ်ကျောင်းသား တော့ပ်ဂေးကတော့ ဘယ်ရထားထိန်းက လမ်းဖယ်ပေးသလဲ ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားနေသည်..။
ဇာတကထဲမှာတော့ မလ္လိကာဘုရင်က ရထားပေါ်မှ ဆင်းလာပြီး ဗြဟ္မဒတ်ဘုရင်ကို ဦးညွှတ်ကြောင်း ရှင်းပြကာ သူက ဇာတ်လမ်းကို အဆုံးသတ်လိုက်သည်..။ မလ္လိကာအစိုးရ၏ ပေါ်လစီက နိုင်ငံရေး(Politics)ဆန်လွန်းပြီး ဗြဟ္မဒတ်ဘုရင်၏ ချဉ်းကပ်မှုက ဘာသာရေး( Religious)ဘက် နွှယ်လွန်းသည်ဟု သူက ထင်နေသည့်အတွက် ''ဒီပေါ်လစီနှစ်ခု ချိန်ခွင်ထဲ ထည့်ကြည့်ကြပေါ့ကွာ '' ဟု ပြောကာ သူ စာသင်ခန်းထဲမှ ထွက်လာခဲ့တော့သည်..။
စာသင်ဆောင်လုပ်သား လက်ချမန်းကတော့ သူရေးဆွဲထားခဲ့သော သေနတ်နှင့် နှင်းဆီပန်းပွင့်ကို သင်ပုန်းပေါ်မှ ဖျက်ရင်း'' ပါဠိဂုရုကြီးတော့ ဘာတွေ သင်ခဲ့ပါလိမ့် '' ဟု တွေးကောင်းတွေးနေပါလိမ့်မည်..။
Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 10:35 AM